Inona no tokony hatahoranao raha misy voka-dratsin'ny infected amin'ny ordinateranao? & Ndash; Semalt Expert manome ny valiny
Inona no tokony hatahoranao raha misy voka-dratsin'ny infected amin'ny ordinateranao? - Semalt Expert manome ny valiny
Antsoina hoe tambajotra robot ihany koa ny Botnets. Tena tambajotra lehibe amin'ny ordinatera sy ny fitaovana finday aty amin'ny virus na malware. Ny hackers dia mifehy ity malware ity ary mahavita manao asa isan-karazany. Ireo hackers na spammers ireo dia heverina ho mpiompy bot. Ny fitaovana famindran-tanana tsirairay dia voafehy sy miasa avy amin'ny bot, ary ny mpanafika dia mandidy ny ordinatera ao amin'ny botnets ary manao ny fihetsika heloka be vava. 8)
Ny haben'ny botnets dia ahafahan'ireo mpanafika hanatanteraka hetsika goavana sy madinika izay tsy ho vita amin'ny alim-pandrenesana na viriosy tsotra. Raha mbola eo ambany fifehezan'ny mpanafika an-tariby ireo botnets, dia matetika ny rindran-trondro no mahazo ny vaovao ary manova ny fitondran-tenany. Vokatr'izany, ireo mpiompy bot dia afaka manofa mora foana ny fidirana amin'ny mpividy sy ny mpanao heloka bevava amin'ny aterineto ary ny fizarana ny botnets ho ampahany amin'ny fanatanterahana asa be dia be, izay natao hanomezana tombony ara-bola be.
Ireo hetsika na fampiasana botnets mahazatra dia voafaritra eto ambany avy amin'i Michael Brown, ny Semalt Mpitarika Success Successor:
Rehefa mahazo mailaka be dia be ianao isan'andro, dia ny fahatsapana fa ny ID mailanao dia eo ambanin'ny fanafihana hack. Ireo botmets spam dia lehibe lehibe ary ampiasaina handefa hafatra momba ny spam, anisan'izany ny malware. Matetika izy ireo no manadino ireo isa avy amin'ny bots amin'ny internet. Ohatra, ny Botnet Cutwail dia afaka mandefa hafatra maherin'ny fitopolo tapitrisa isan'andro isan'andro. Ampiasaina be ny fampielezana viriosy sy bots ary mametraka ordinatera maro kokoa any amin'ny botnet'ny foibe..
2. Fanafihana DDoS
Ny fanafihan'ny DDoS dia mampiasa ny haben'ireo botnets ary mameno ny tambazotra na serivisy manana solon'anarana. Izy ireo ihany koa no manome ny ordinatera tarihan'izy ireo, ary ny tanjon'izy ireo dia ny fikambanana lehibe, antoko politika ary orinasa mpamokatra entana. Miezaka ny hampitsahatra ny fanafihana ara-bola izy ireo.
3. Fitotonganana ara-bola
Ny fitotonganana ara-bola dia ahitana ny botnets izay natao ho an'ny fanodikodinam-bola mivantana avy amin'ny orinasa lehibe. Mangalatra ihany koa ny fampahafantarana karatra amin'ny carte de crédit sy PayPal. Ny botnets ara-bola, toy ny Zeus botnet, dia tompon'andraikitra amin'ny fanafihana goavana misy ny dolara maro nangalarina avy amin'ny orinasa marobe tao anatin'ny fotoana fohy.
4. Taratasy entrusions
Ireo botnets kely bitma izay ahitana botsa avo lenta ary miezaka mampandefitra ordinatera manokana. Ireo mpanafika dia mandefa botsa ho an'ireo fikambanana izay mora miditra ary manaparitaka fitaovana maro kokoa ao amin'ny tambajotra sosialy. Mampidi-doza ny fampidiran-drivotra rehefa manafika ireo fikambanana lehibe izy ireo ary mangalatra antontam-bola ara-bola, tranonkala ara-tsaina ary fampahalalana mpanjifa.
Azo antoka ny filazana fa ny botnets dia noforonina rehefa manolotra botsa avy amin'ny rafi-pitantanana azy na manam-pahaizana iray manokana ny mpahay siansa raha tsy mahalala ny mpampiasa azy. Ny botnets dia manafatra milina marobe avy hatrany. Raha vao manokatra ny rakitra maloto ianao dia hitatitra ny botsika amin'ny botmaster izay hamela azy / hahafantatra fa misy fitaovana solosaina vaovao vonona ny ho voasazy. Ny toetra mampiavaka ny botnets sy ny bots dia mampifanaraka azy ireo amin'ny fisintonana maharitra Source .